LEGO Fat Boy ပုံတူသည် Harley-Davidson ပြတိုက်သို့ရောက်ရှိသည်
15 / 08 / 2019 16 / 08 / 2019 ဂရေဟမ် 1100 Views စာ0မှတ်ချက် 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, 2019, Creator Expert, D2C, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, Lego, Lego Creator Expert, shop.LEGO.com
၏ကြေညာချက်ဆင်နွှဲရန် Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, အ Lego အုပ်စုသည်အုတ်များ သုံး၍ အရွယ်ပြည့် Fat Boy ကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင် Harley-Davidson သည်အမေရိကန်၊ Milwaukee တွင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ ဘဝအရွယ် Lego အပန်းဖြေ of Lego Creator Expert 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy (ပြန်လည်သုံးသပ်) ကုမ္ပဏီ၏ဇာတိမြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီး Harley Davidson ပြတိုက်တွင်နေထိုင်သည်။
လုံးဝလုပ်ထားတဲ့အသေးစိတ်ပုံစံ Lego ဒြပ်စင်, ငွေအ coated p ပါရှိပါတယ်arts, အသံနှင့် wi-fi ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ bespoke တည်ဆောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်နာရီ ၈၆၅ နာရီနှင့် ၆၉,၅၆၉ အပိုင်းအစများကြာခဲ့သည်။
"တကယ်တော့ဒီနေရာမှာ Milwaukee မှာ Harley Davidson ရှိခဲ့တဲ့ ၁၉၀၃ ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ရှိဖို့နဲ့ဒီ p ကိုရဖို့artတူသောဒဏ္aryာရီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ nership Lego မှ ဒီမှာအတူတကွဒီမှာ p ၏အသီးအပွကြည့်ရှုပါartဒါကမယုံနိုင်စရာပဲ” ဟု Harley Davidson စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မဟာဗျူဟာအမှတ်တံဆိပ်လေ့လာသုံးသပ်သူနာသန် Kolbe ကပြောကြားခဲ့သည် Spectrum သတင်းများ 1.
အဆိုပါမော်ဒယ် Tour ဖြစ်ခဲ့သည် Lego ယူအက်စ်တစ်လျှောက်လုံးစတိုးဆိုင်များနှင့်အခြားဖြစ်ရပ်များ။
“ တစ်ဖက်စီမှာအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်။ သင်ကြားတဲ့အသံက revving up နဲ့ st မှတကယ်စစ်မှန်တဲ့အသံပဲartHarley Davidson ဆီ Boy မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။
၎င်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့် LEGO Design Manager Jamie Berard နှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုဖတ်ပါt.
10269 Harley-Davidson ဆီ Boy သီးသန့်မှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.lego.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Star Wars BOOST 75253 Droid တပ်မှူး
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: တိရိစ္ဆာန် party →